H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး)
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ကဘာလဲ။
H5N1 တုပ်ကွေးရောဂါသည် ကြက်ငှက်များတွင်ဖြစ်သော ပြင်းထန်သည့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ရောဂါမဖြစ်သည်။ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကို ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများစွာရှိသော်လည်း H5N1 နှင့် H7N9 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသည် ဆရာဝန်များ အထူးဂရုထားသော ရောဂါပိုးများဖြစ်ပါသည်။
ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ငှက်ရိုင်းများတွင် စတွေ့ရပြီး ထိုရောဂါဖြစ်စော ကြက်၊ ငှက်၊ ဘဲများကို ဘူတို့စားသုံးမိရာမှ လူတို့တွင် ကူးစက်ပြီး သေစေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် H5N1 ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံများမှာ ဘဂ်လားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ အီဂျစ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်တို့ ဖြစ်သည်။
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
H5N1 တုပ်ကွေး သည် ငှက်များတွင် အဖြစ်များပြီး အမြစ်ပျောက်အောင်နှိမ်နင်းရန် ခက်ခဲသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
H7N9 ဖြစ်သော ပျမ်းမျှအသက်သည် အသက်၆၂ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး H5N1 သည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၂၆ နှစ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုရောဂါသည် လူလူချင်းကူးစက်ခြင်းမှာ ဖြစ်ခဲပြီး ချွင်းချက်အနေဖြင့် ရောဂါဖြစ်နေသော သူနှင့် အနေနီးလွန်းသောသူများ၊ ရောဂါဖြစ်နေသော မိခင်မှ နာမကျန်းသော ကလေးအားကူးစက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တွေ့ရများသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ သာမန်တုပ်ကွေးနှင့် ဆင်တူသော်လည်း သင့်တော်သော ကုသမှုများ မခံယူလျှင် ရောဂါပိြုပင်းထန်လာနိုင်ပါသည်။
အချို့သူများသည် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ ခံစားရပါသည်။ မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်းဖြစ်လျှင် H5N1 ရောဂါဖြစ်နေကြောင်း သိသာစေပါသည်။
အောက်ပါတို့ ခံစားရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသင့်ပါသည်။
ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်လာလျှင်
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်ဖူးသော နေရာသို့ ခရီး သွားဖူးလျှင်
သင်သည် ကြက်မွေးမြူရေးခြံများနှင့် လေဟာပြင်ဈေးများကို သွားခဲ့လျှင် ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
H5N1 ဗိုင်းရပ်စ်သည် ငှက်ရိုင်းများ မှတဆင့် ထောင် သောင်းနှင့် ချီသော မွေးမြူရေးငှက်များကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ပြီး သေဆုံးစေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသော ငှက်များကို သတ်ပစ်ရပါမည်။ ရောဂါပိုးရှိသော ကြက်များ၊ ဘဲများနှင့် ကြက်ဆင်များနှင့် ထိတွေ့နေသော လူများသည် ရောဂါကူးစက်ခံနိုင်ရချေများပါသည်။
ရောဂါရှိသော ကြက် ဘဲများ၏ အညစ်အကြေးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သည် လှောင်အိမ်များ နှင့် မွေးမြူရေးပစ္စည်းများတွင် တွယ်ငြိနေတတ်သည်။ သို့သော် လူများသည် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါရှိသော အကောင်များကို စားသုံးခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုရောဂါပိုးသည် အပူနှင့် ထိတွေ့လျှင် သေဆုံးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရောဂါရှိသော ကြက် ဘဲများနှင့် ယင်းတို့၏အညစ်အကြေးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွယ်ငြိနေသော လှောင်အိမ်များ နှင့် မွေးမြူရေးပစ္စည်းများကို ထိတွေ့ရသောသူများသည် ရောဂါကူးစက်ခံနိုင်ရချေများပါသည်။
မချက်ပြုတ်ထားသော ကြက်များ၊ ဥများကို စားခြင်း
ရောဂါဖြစ်နေသော ကြက်များကို ထိတွေ့မိခြင်း(သင်သည် မွေးမြူရေးခြံပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ရောဂါဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရသူဖြစ်လျှင် ပိုပြီး ကူးစက်ခံနိုင်ချေများပါသည်။)
ကြက်ငှက် တုပ်ကွေးဖြစ်သော နေရာများကို ခရီးထွက်မိခြင်း
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများခံစားရပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် သင့် နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းမှ အရည်ကိုဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်အဆုတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံရိပ်များကို မြင်ရသောကြောင့် သင့်ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် တိကျသော ဆေးများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
H5N1 Influenza (ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် ရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုများ ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ဆိုသည်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသတ်ဆေးများသည် ထိရောက်မှုမရှိဟုဆိုပါသည်။
သို့သော် ကံဆိုးစွာ သင်သည် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်နေပါက အခြားသူများဆီသို့ ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် သင့်ကို သီးသန့်လူနာခန်းများတွင် ထားပြီး ကုသမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ရောဂါဖြစ်သူများထဲမှ အချို့သည် အသက်ရှုစက်များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပါဆေးရန်လိုအပ်ခြင်းများရှိလာနိုင်ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် H5N1 တုပ်ကွေး ဖြစ်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို တုပ်ကွေးရောဂါ မဖြစ်မီ ကတည်းက ကြိုထိုးထားမှ ထိုဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်မှုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော ဗိုင်းရပ်စ်ပုံစံတမျိုးကို ကာကွယ်ရန် နောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေး တမျိုးထိုးရမြည်ဖစ်ပါသည်။
သင်သည် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်တတ်သော ဒေသများနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာသူဖြစ်ပါလျှင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ထုတ်ပြန်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်မွေးဌက်များကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နယ်ဘက်သွားခြင်း၊ မွေးမြူရေးခြံများနှင့် လေဟာပြင်ဈေးများသွာခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးခြင်းသည် ရောဂါပိုးများကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံး အရက်ပြန် ၆၀% ပါစော လက်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပါ။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ခရီးမသွားမီတွင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ကာကွယ်ဆေးသည် တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကို မကာကွယ်နိုင်သော်လည်း လူတို့တွင် ဖြစ်သော တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်များမှ လူသို့ကူးစက်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရန် မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ထိတွေ့ရသော ပစ္စည်းများ နှင့် ထိတွေ့ထားသော မျက်နှာပြင်များအားလုံးကို ရေနွေး၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။
သေချာစွာချက်ပြုတ်ပါ။ ကြက်ကို အရည်များခမ်းသွားသည် အထိချက်ပြုတ်ပါ။ ကြက်၏ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၁၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၇၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ)ချက်ပြုတ်ပါ။
ကြက်ဥ အစိမ်းများကို သန့်စင်အောင်လုပ်ပါ။ ကြက်များ၏ အညစ်အကြေးများသည် ဥအခွံများတွင် ပေကျံနေတတ်သည်။ မချက်ပြုတ်ရသေးသော အသားများ၊ ဥများစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
Avian Influenza (Bird Flu) - Topic Overview. http://www.webmd.com/cold-and-flu/tc/avian-influenza-bird-flu-overview#3. Accessed December 16, 2016
Frequently Asked Questions About Bird Flu. http://www.webmd.com/cold-and-flu/flu-guide/what-know-about-bird-flu#3. Accessed December 16, 2016
Bird flu (avian influenza). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bird-flu/basics/prevention/con-20030228. Accessed December 16, 2016